Unako "ukuqinisa" iNtyala eNtyala
Xa ufuna ukunikela ubungqina enkundleni, ngaba ufuna ukuba ufunge isifungo kwiBhayibhile? Lo ngumbuzo oqhelekileyo phakathi kwabakholelwa kuThixo nabangewona amaKristu. Umbuzo onzima ukuphendula kwaye umntu ngamnye kufuneka azenzele isigqibo. Ngokubanzi, akufunwa ngumthetho. Kunoko, unako "ukumisela" ukuthetha inyaniso.
Ngaba Ufanele Ufungele IBhayibhile?
Iziboniso zeNkundla kumabhayisikobho aseMerika, ithelevishini kunye neencwadi zibonisa abantu bafungela isifungo sokuthetha inyaniso, yonke inyaniso, kwaye akukho nto ngaphandle kwenyaniso.
Ngokuqhelekileyo, benza njalo ngokufunga ngesifungo "kuThixo" ngesandla kwiBhayibhile. Iziganeko ezinjalo ziqhelekile kangangokuba abantu abaninzi babonakala becinga ukuba kuyadingeka. Nangona kunjalo, akunjalo.
Unelungelo 'lokuqinisekisa' ukuba uya kuthetha inyaniso, yonke inyaniso, kwaye akukho nto ngaphandle kwenyaniso. Akukho zithixo, iiBhayibhile, okanye nayiphi na enye into enokwenkolo yokubandakanyeka.
Oku akuyiyo mbambano echaphazela kuphela abantu abangakholelwa kuThixo. Amakholwa amaninzi amaninzi, kuquka namanye amaKristu, akwenzeki ukufungela izifungo kuThixo kwaye angathanda ukuqinisekisa ukuba baya kuthetha inyaniso.
IBritani iqinisekisile ilungelo lokuqinisekisa ngaphandle kokufunga isifungo ukususela ngo-1695. E-America, uMgaqo-siseko ubhekiselele ngokucacileyo kunye nokufungela ngamanqaku amane.
Oku akuthethi ukuba akukho mingcipheko echaphazelekayo xa ukhetha ukunqinela kunokufunga. Kuthetha ukuba abantu abakholelwa kuThixo abodwa bodwa kule nketho. Ngenxa yokuba zininzi izizathu zezopolitiko, ezomntu, kunye nezizathu zokusemthethweni zokuqinisekisa kunokufunga, kuthetha ukuba kufuneka ukhethe oku xa kwenzeka imeko.
Kutheni Kufuneka Ama-atheist Aqiniseke Kunokuba Afunge?
Kukho izizathu ezintle zezombusazwe kunye nezizathu zokuqinisekisa isifungo kunokufunga.
Ukulindela abantu enkundleni ukuba bafunge isifungo kuThixo xa kusetyenziswa iBhayibhile kunokuncedisa ukuphakama kwamaKristu eMelika. Akunjalo nje " ilungelo " kumaKristu inkundla zibandakanya iinkolelo zamaKristu kunye neetekisi kwiinkqubo zomthetho.
Kwakhona luhlobo lokuphakama kuba bafumana imvume yokusemthethweni karhulumente kwaye kubemi kulindeleke ukuba bathathe inxaxheba.
Nangona ezinye iimfundiso zecawa zivumelekile, kusenokuthi ukuba urhulumente uthanda inkolo ngendlela engafanelekanga.
Kukho izizathu ezilungileyo zokuziqinisa isifungo kunokufunga. Ukuba uzinikela ekubeni uthathe inxaxheba kwisenzo esiyimpumelelo, unokwenza isitatimende sikawonke-wonke sokuvunywa kunye nesivumelwano kunye neziseko zonqulo zeso siko. Akuphelelanga ngokwengqondo ukuvakalisa esidlangalaleni ubukho bukaThixo nokuxabisa kweBhayibhile xa ungakholelwa nantoni na.
Ekugqibeleni, kukho izizathu ezifanelekileyo zomthetho zokuqinisekisa isifungo kunokufunga. Ukuba ufunga kuThixo kwiBhayibhile xa ungakholelwa kuyo, ngoko ke wenza okungafaniyo noko ufanele ukukwenza.
Awukwazi ukuthembisa ngokunyanisekileyo ukuthetha inyaniso kwimibhiyo apho ulala khona malunga neenkolelo zakho kunye nezibophelelo zakho. Enoba le nto ingasetyenziselwa ukuphazamisa ukuthembeka kwakho kwiinkqubo zamatyala zangoku okanye ezizayo, umcimbi weengxoxo, kodwa kuyingozi.
Ingozi kuma-atheists ekuqinisekiseni indlela
Ukuba ucela enkundleni evulekile ukuba uvunyelwe ukufungisa isifungo sokuthetha inyaniso kunokufunga kuThixo kunye neBhayi- bhileni, uya kuluqwalasela kakhulu.
Ngenxa yokuba wonke umntu "uyazi" ukuba ufunga isifungo kuThixo kunye neBhayibhile ukuba uthethe inyaniso, ngoko uya kutsalela ingqalelo nangona wenza amalungiselelo ngaphambi kwexesha.
Kungenzeka ukuba le ngqalelo iya kuncika embi kuba abantu abaninzi banxulumanisa ukuziphatha kunye noThixo kunye nobuKristu. Nabani na owenqabelayo okanye ongaphumeleli ukufungela uThixo uya kuba nokukrokra ukuba ubuncinane ipesenti yabamkeli.
Ubandlululo kubantu abangakholelwa kuThixo eMelika luye lwasasazeka. Ukuba ukrokrelwa ukuba ungakholelwa kuThixo, okanye nokuba ungakholelwa kuThixo ngendlela abantu abaninzi abayenzayo, ngaba abagwebi nabagwebi banokuthi bathambekele ekunikeni ubungqina bakho ubunzima. Ukuba ngaba ityala lakho lijongene nalo, unokuba novelwano oluncinane kwaye ngoko ke ungeke ube namandla okuwunqoba.
Ngaba ufuna ukubeka umngcipheko ekulahlekelweni kwecala lakho okanye ukulimaza imeko oyenayo?
Le nto ayinobungozi bokuthathwa ngokulula, nangona kungenakwenzeka ukuba kukho naziphi na iingxaki ezinzulu.
Nangona kukho ezininzi zezopolitiko, izizathu, kunye nezizathu zomthetho ukuqinisekiswa kunokufunga, zikhona izizathu ezinzulu kakhulu zokumisa intloko yakho kwaye ungaphikisani nokulindela.
Ukuba ugqiba ukuba kukulungele ukuqinisekiswa kunokufungela isifungo, kufuneka uyenze kuphela xa uqonda ukuba izingozi zibandakanyeka. Kwakhona, kufuneka ulungele ukujongana nabo. Kancinci, kuya kuba yinto efanelekileyo ukuthetha inkundla yenkundla kwangaphambili malunga nokuqinisekisa ngaphandle kokufunga.
Umda wexesha lokuQala iNkqubela, i-1095 - 1100
U-Hitler Wayengumntu Ongakholelwa KuThixo Owabulala Izigidi Kwigama Lokukholelwa KuThixo, i-Secularism?
I-Biography kaSteve Bannon
Njani enye idolophu iLondoloze izindlu zayo zokuPhukisa
Iingongoma eziPhambili kwiMinyaka ephakathi
G Major Scale kwiBass
Umlando weGalofu FAQ
I-Ocean Food Chain